5 Types dzeVakadzi Pakusvirana – Makuhwa.co.zw
5 Types dzeVakadzi Pakusvirana
5 Types dzeVakadzi PaSviro. Vakadzi vanoda zvakasiyana siyana pasviro so its only fair kuti we talk about the 5 types of women varipo pasviro.
Vanoda Mboro Hombe: Ava vakadzi vanozviti vanonakirwa nemboro hombe chete and usually ava vane mapeche mahombe and only mboro hombe can give them pleasure. Vanovenga varume vakawanda especially vane mboro diki. Havana respect pasviro and vanoita noie vakanakirwa nemboro.
Mudamboro: Uyu mukadzi asina basa neSize yeMboro asi anoda kutunda chete. Kana akangoona mboro anobva atota and hazvina basa kuti ndeyani. Vamwe vanovati mahure but havasi mahure vanhuwo havo vanoda MBORO and they will give away beche pasina kana mari.
Joki, Hure: Mukadzi asakara zvekuti haachanakirwe nemboro. Anotengesa beche kuti awane mari and zvinonetsa kuti anzwe kunaka kwemboro, hazvina basa kuti mboro yacho ihombe or diki or chakakora or not. Shasha pachikapa sezvo vachida ukurumidze watunda kuita kuti business rifambe.
Vanorespecter Mboro: Mukadzi anonakirwa nemboro zvekuti kana isati yapinda anenge akutotunda. She is the type yekuti akasvirwa akanakirwa nemboro, anotenda murume abva kumusvira. Anorespecter mboro and anoda kufadza murume nenyini. Vanenge vakadzidza kufadza murume vari mashasha echikapa. Kazhinji they are not very beautiful asi ndivo vakadzi vane nyini dzinonaka.
Shavi rekusada Mboro: Mukadzi asingade mboro, anoita kunge ane shavi rekusada sviro. Ukamubata anopa excuse and ndivo zvakare vakadzi vanoti once wamusvira one position hamuchinje. Mukadzi uyu Akavenga zve romance and usually anenge ari danda pasviro haade zvechikapa or kuita new things pabonde. Ndivo vakadzi vanozoita mahure after varambwa nevadiwa vavo.
Related Topics:5 Types dzeVakadzi Pakusvirana
Vanotoitsvaga Mhosva kusvika vaiwana!
Sugar Mamma vanetsa paMbare – PHOTO